Avy amin'ny kinova manaraka dia "miafina" ny fampandrosoana Ubuntu hisorohana ny fitsikerana | Avy amin'ny Linux
Avy amin'ny kinova manaraka dia "miafina" ny fampandrosoana Ubuntu hisorohana ny fitsikerana
Nano | | About us
Mety tsy hahagaga ny sasany izany ary ny hafa eny, angamba ny fanboy dia hivoaka miaraka amin'ny pikes sy fanilo hiaro an'i Ubuntu, fa ity fanapahan-kevitra raisinao ity kanônika tsy aiza na aiza no tsara na marina, tsy araka ny hevitro.
Voalohany indrindra, nohazavaiko fa mpampiasa Ubuntu aho, tiako ny distro ary fantatro ny fomba fampiasana azy mihoatra ny fantatry ny mpampiasa mahazatra, ka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny "Noob ianao amin'ny fampiasana Ubuntu, mitroka Ubuntu" zavatra toy izany, mifady, raha toa ka haneho hevitra tsara kokoa izy ireo dia ataovy amin'ny fototra.
Ary fisaka, tsy tiako io hevitra io tsotra fotsiny satria manohitra tanteraka ny fivoaran'ny fizarana Linux ary manilika ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana, mamindra azy ireo fotsiny ho mpandrafitra programa Ubuntu, izay toa tsy manaja ahy. Tsy holaviko fa ho ahy dia nihatsara ny firaisankina na ny fidiran'ny Amazon amin'ny toerana misy anao lesoka izany (raha ny fahitako azy), fa avy amin'ny "Ataovy manokana ny fizotran'ny fampandrosoana" Toa hadalana tanteraka amiko izany, andao hojerentsika ny antony:
"Hitanay fa hanakiana be foana ny mpitsikera, na miresaka hevitra vaovao amin'izy ireo ianao na tsia"
Izany no nolazain'i Mark Shuttleworth momba an'io. Eny, araka ny nolazain'i Jack the Ripper, andao handeha amin'ny ampahany:
Voalohany indrindra, ary avelao izy hazava: ny fitazonana ny fizotran'ny fampandrosoana tsy miankina dia tsy midika hoe hakaton'izy ireo ny kaody Ubuntu Ho an'ireo tabloid izay mamaky ny lohateny fotsiny indraindray dia mihazakazaka maneho hevitra. Amin'ny teny tsotra dia tsy hiteny izay ataony na zavatra hafa izy ireo raha tsy mandefa ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny kaody.
Ankehitriny, ho kiana ny mpitsikera… Ka diso ve ny fitsikeran'ny olona ny ataon'i Canonical ary tsy azony resena lahatra amin'ny fomba hafa? Miala tsiny aho fa tena toerana misy ny fahefana izany, hoy aho, ary tsy hitako tsara izany.
Ny sasany milaza fa fanandramana nataon'i Canonical hahazoana dokam-barotra bebe kokoa, satria ny eritreritra dia handeha manerana ny tsingerin'ny fampandrosoana ary rehefa latsaka ny tontolo andro ny fandefasana dia ho hitantsika ny fipoahan'ny tsikera, na ny tsara na ny ratsy. Ary satria tsy azo nodinihina ireo fanovana raha naseho tamin'ny fivoarana izy ireo, dia hipoaka kokoa ny adihevitra eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina.
Ny marina dia izaho, raha miteny manokana, dia tsy manohana an'io fanapahan-kevitra io mihitsy ary toa fihetsika mahatsiravina amiko izay tsy miresaka tsara momba ny Canonical na Mark Shuttleworth satria asehony aloha fa amin'ny fotoana maharitra dia tsy maninona aminy ny soatoavina ananan'ny hevitra sy / na fanamarihana avy amin'ny fiarahamonina, na tsara na ratsy. Mampiseho koa izany fa mihamaro ny olona maniry hampihatra tsingerin'ny fampandrosoana tsy refesi-mandidy, izay toa tsy mety amiko koa. Mampiseho ny tsy firaharahiany tanteraka ny fandraisana anjara azon'ny vondrom-piarahamonina atao amin'ny Ubuntu hamelana azy ireo ho mpandahatra fandaharana tsotra na fampiasa ho an'ny mpampiasa (tsy ny hoe front-end dia tsotra na ratsy, fa izay tsy eo alohan'izany dia tsy ho afaka hanao izay tian'izy ireo). Ary ny zava-misy amin'ny fikarohana mety hanaovana doka, fa ny famoronana lelafo toa an'io dia tsy nanampy ahy kely akory.
Tena fananako izy io ary avy aiza izao, tsy afaka mahazo zavatra be loatra aho raha tsy miverimberina. Ahoana raha te hahita izay hevitrao momba an'io aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Avy amin'ny kinova manaraka dia "miafina" ny fampandrosoana Ubuntu hisorohana ny fitsikerana
91 hevitra, avelao ny anao
raerpo dia hoy izy:
Tsara raha mamela rohy mankany amin'ny vaovao ianao. mahafaly
Mamaly an'i raerpo
Tanisao ny loharano, ny hadisoako.
Ny fandraisana anjara azon'ny distro rehetra atao amin'ny fiarahamonina dia ankasitrahana, fa ny marina dia tsy toy ny teo aloha intsony ny Ubuntu. Amin'izao fotoana izao aho dia mizaha ny dikanteny 12.10 ary ny marina dia nitranga tamiko mitovy amin'ny an'ny kinova 4; fianjerana, fianjerana ary fianjerana bebe kokoa.
Nanomboka tamin'ity distro ity aho ary ny marina dia somary mampalahelo fa nandritra ny taona vitsivitsy dia tsy nampiasa azy io afa-tsy ny fitsapana. Manantena aho fa amin'ny tsikera kely dia manomboka mifantoka amin'ny asany izy ireo ary tsy mametra ny mpampiasa azy ireo (izay mbola tsy nataony tamin'ny kinova farany nataony). Misaotra tamin'ny fampahalalana.
Izay no antony tsy mbola nanandramako ilay kinova vaovao. Noho ny te hahafanta-javatra, inona no fianjerana omeny anao?
Eny, ny marina dia tsy tiako ny firaisankina, ampiarahina amin'ilay hoe tsy avelan'ny foibe rindrambaiko hametraka ahy na dia Dropbox aza aho ary satria betsaka ny enti-mody momba ny Data Structure dia tsy nijanona be loatra tamin'ny fitsapana azy aho.
Ny mpitantana ny arisiva koa dia nianjera tamin'ny fakana zip roa. Tsy dia nifantoka loatra tamin'izy ireo aho satria terena be aho any am-pianarana miaraka amina tetikasa sasany momba ny recursion ka dia nifantoka tamin'ny fahitana ny vaovao fotsiny aho, fa aza maharitra ela.
Raha ny marina dia zavatra mitovy tamiko no nanjo ahy tao amin'ny Elementary Luna (noho ny antony mitovy fa mifototra amin'ny Ubuntu) ary izaho koa tsy naharitra ela nanana izany.
Eny, olana foana io eo am-piandohana. Te handeha any amin'ny Debian KDE aho, tsy haiko, tsy maintsy mijery aho rehefa manam-potoana hifindra-monina tanteraka.
Tsy te hanafina ny fampandrosoana aho, "izay mandoro ronono mahita ny omby sy mitomany." Tsy tiako ny ubuntu, na aiza na aiza no jerenao. Mijanona amin'ny fitsapana debian aho. Raha ny marina dia mizaha toetra an'i Solydxk aho, ary tena mandaitra.
Na izany na tsy izany, hisosika ihany ny raharaha. Ho hitantsika eo alohan'ny hivoahan'ny kinova farany. Etsy ankilany, ahoana ny fomba hivoahan'ny betas amin'izay ???
Hiditra an-tsokosoko izy ireo, azoko antoka, na dia ny beta sy ny alphas aza ... tsy fantany hoe hanao ahoana izy ireo
Vao tsy ela akory izay dia nangataka hevitra tamin'ny mpampiasa ny Ubuntu hanatsarana ny vokariny, saingy heveriko fa efa matotra ny Ubuntu ary izao dia efa nanisy tanjona ny tanjona eo amin'ny tsena sy ny paikady harahina hanatanterahana azy, noho izany, mazàna dia manisy fiovana kely izy io. (toy ny fametrahana ny bokotra farafahakeliny sns amin'ny varavarankely ankavia), izay mazàna manosika ny mpampiasa ny priori, ary avy eo manohy manatanteraka azy ireo amin'ny fanovana lalindalina kokoa (Unity).
Heveriko fa izany no antony lehibe indrindra amin'ity fanapahan-kevitra ity, hanohy hamindra tsikelikely ireo fanovana i Ubuntu, mba hanavahana ny tenany amin'ireo distro hafa, ary hahafahany mampiseho ny "heviny" momba ny fizarana Ubuntu.
Ho an'ireo rehetra tsy afa-po, misy fizarana maro mifantoka amin'ny karazana mpampiasa rehetra, ary fantatr'i Canonical izany.
Na dia toa fanadalana / barbarika / tsy misy dikany aza ny fiovana sasany ao amin'ny Ubuntu, fantatr'i Canonical izay ataony, ary efa nandinika tsara ny zava-drehetra izy.
Ny tsy fantatro dia izay hoeritreretiny momba ny kinova alfa sy betas, raha tsy maintsy asehony ny fanovana ao aminy ...
Ny antony dia manana ny tanjon'izy ireo ara-barotra voamarika tsara izy ireo, satria tsy hiresaka aho satria zavatra avy amin'ny Canonical tiako izany, mamela ahy hizaka ny tenako ao anatin'ny tontolo Linux fa manana rafitra iray mifantoka amin'ny varotra.
Ny zavatra dia ao amin'ilay hoe "misy disto hafa ary fantatr'i Canonical izany", tsy mieritreritra aho ary tsy hieritreritra an'izany satria ity fomba fanehoan-kevitra amin'ny fitsikerana ity dia tsy milaza zavatra tsara, miala tsiny aho fa tena milaza amiko izy ireo "mba tsy hitsikera ahy ho an'ny zavatra iray, tsara kokoa raha tsy milaza aminareo na inona na inona aho »tsy mampiseho fahamatorana na amin'inona na amin'inona ary noho ny hadalàna aza noho ny zava-misy efa voatonona miaraka amin'ny betas, handefa betas cape ve ianao nefa tsy misy fampiasa vaovao? Rahoviana ianao no hizaha toetra azy ireo, rahoviana no ampiharina? Mampihomehy izany.
Tsy ho sasatra miteny an'io aho, fanapahan-kevitra Canonical mahatsikaiky izany raha ny fahitako azy. Azonao atao ny mandalina tsara ny zava-drehetra, saingy tsy manome toky fa marina ny fanapahan-kevitra.
Manaiky ny hevitry ny zerberros aho, mikendry sehatra iray i Ubuntu ary mihatsara mba ho hafa. Raha izaho manokana dia tiako ny Ubuntu amin'ny solosaina findriko ho an'ny fototra, chakra ho an'ny solosaiko pc ho an'ny zava-drehetra ary hampiodina sy hianatra Debian, amin'ny mpizara an-trano na inona na inona.
Ivan Bethencourt dia hoy izy:
"Vao tsy ela akory izay, nangataka hevitra tamin'ny mpampiasa i Ubuntu mba hanatsarana ny vokatra"
Marina izany, Canonical izao mangataka fanomezana ... Maninona isika no misoloky.
Valiny tamin'i Iván Bethencourt
Ary raha mitsikera foana ny mpitsikera ... dia maninona no mitodika any amin'ny fiarahamonina sy ny mpampiasa anao? Na izany na tsy izany, raha mitsikera an'i Ubuntu ny mpitsikera (mazàna ny troll) dia hanao toy izany koa izy ireo anio na afaka 6 volana ...
ny mankahala dia hankahala ary ny troll dia hitarika antsika!
Amiko ny olana toa izany dia ny fihetsika maneho fitsikerana. Raha mazava izy ireo fa hanakiana azy ireo amin'ny fomba rehetra, maninona no mitomany izy ireo ary manapa-kevitra ny tsy hanaporofo na inona na inona? Aleoko ihany ny manohy mahazo valiny sy fotoana, rehefa ela ny ela, ireo fanakianana ireo dia tsy hanova ny valiny, na tsy hampijaly mafy. Toa tsy matotra amiko mihoatra ny zavatra maro hafa izy.
«Aleoko manohy mahazo valiny» ...
Raha ny fitsikerana dia fitsikerana ny fitsikerana mihitsy, ahoana no hamaritanao ny hevitra tsara sy mahasoa?
Ohatra iray amin'ny lafy tsara ny resaka Shopping lens, saingy misy ohatra ratsy ihany koa.
http://goo.gl/ySO9L ity ilay fanamarihana tany am-boalohany avy any Shuttleworth, araka ny ho hitantsika, tsy mitovy amin'ny navoaka hatreto izy io.
Mpampiasa Ubuntu aho ary tsy dia tiako loatra ity fanapahan-kevitr'i Canonical ity fa araka ny filazan'i zerberros, dia tsy maintsy manana drafitra asa voafaritra mazava momba izay tian'izy ireo hatao izy ireo. Ankoatr'izay dia tsy hitako izay olana eo amin'izy ireo te-hanao zavatra toa izany. Miombon-kevitra amin'ny zerberros koa aho rehefa nilaza izy fa fantatr'i Canonical fa misy fizarana hafa ho an'ireo izay tsy te hanaraka an'i Ubuntu. Ho fanampin'izay, ho antsika izay tia Ubuntu nefa indraindray mahita tsy mahazo aina ny Unity, azo apetraka ihany koa ny tontolon'ny birao hafa toa ny GNOME, izay ilay ampiasako amin'izao fotoana izao ary, na eo aza ny filazan'izy ireo fa ny GNOME dia tsy azo ovaina toy ny taloha. , Ie azonao atao. Toy izany koa, misy kinova hafa an'ny Ubuntu toy ny Kubuntu, Xubuntu, sns. Izany rehetra izany dia lazaiko amin'ny maha mpampiasa ahy fa tsy amin'ny developer, programmer sns. Azoko tsara fa mety manana ny heviny sy ny antony tsy ankafizin'izy ireo io fanapahan-kevitra io saingy tsara… Mihevitra aho fa tsy misy azo atao momba izany na dia misy aza ny safidy hafa azo ampiasaina hitarainana momba izay tsy tianay, toy ny forum Ubuntu. Mino aho fa manohy mihaino ireo mpampiasa i Canonical fa, araka ny nambarako dia manana tsena sy paikady mialoha izy ireo izay tsy maintsy arahin'izy ireo. Raha te-hanatratra ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ianao dia ny manohana no tsara indrindra azonay atao amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anao.
Eny, raha mandritra ny fizotran'ny fampandrosoana dia tsy manisa na inona na inona izy ireo ary izahay mpampiasa dia tsy afaka maneho hevitra momba ny làlan'ny fizarana, tsy maintsy ataontsika izany rehefa mivoaka izany, marina? Ny fitsikerana dia hahatonga azy ireo eny na eny.
Fanapahan-kevitra mety tianao na tsia fa tsy maintsy ekenao, ary araka ny efa nolazain'izy ireo teto dia fantatry ny canonika tsara izay natao
Tsy fantany izay ataony, fantany izay kasainy hatao ... ny olana dia ny te hatoky an'izany ary, ny fanontaniako dia hoe ahoana no hataon'izy ireo hitazomana ny fivoaran'ity distro miafina ity raha toa ka tsy maintsy manao alfa sy beta izy ireo? Hataony mihidy ve ny alphas sy betas?
Ary inona no hitranga amin'ireo distro miankina amin'ny ubuntu (ohatra ny OS elemntary ohatra)? Heveriko fa ho sarotra kokoa izao ny fampandrosoana azy ireo, sa tsy izany?
Eny fa tsia. Canonical dia hitazona tsiambaratelo ny fampandrosoana ny Unity, fa ny fototra sy ny rafitr'i Ubuntu, heveriko fa tsy ho voakasik'izany.
Asp1r3 dia hoy izy:
Eny, araka ny voalazanao fa tsy fahombiazan'ny mpandraharaha izay tsy maintsy manorim-ponenana amin'ny famoronana fampiharana, izay maharary
Valiny amin'ny Asp1r3
Ary ahoana no hahazoan'izy ireo ny tamberina ilaina amin'ny fanitsiana ireo lesoka? Tsy haiko, toa hafahafa amiko ity, tsy hitako izay dikany:
Wintersun dia hoy izy:
Na izany na tsy izany, ny marina dia ny Canonical dia toa Apple kokoa isan'andro. Hifarana ve ny fanidiana ny kaody Unity? Amin'ity vaovao ity dia mijanona eny amin'ny rivotra ihany ny mety.
Ny marina dia ny Canonical tato ho ato dia nanao fanakorontanana betsaka tamin'ny fanoloran-tenany ho Open Source.
Amin'ny maha mpampiasa ahy ny KDE sy ny Fedora dia aleoko ireo vondrom-piarahamonina roa ireo izay nitana hatrany ny fanoloran-tenany hanana loharano misokatra sy ireo vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Valiny tamin'i Wintersun
Mijanona eny amin'ny rivotra io, saingy miahiahy aho fa hanidy ny kaody Unity ry zareo, hoy aho satria ho resy.
Tiako ianao hanidy kely ny tetik'asa mba tsy hisy ny fisaratsarahana kely loatra, izay hanimba ny Ubuntu amin'ny farany, tokony hanakana anao tsy hamorona remixes an'ny Ubuntu amin'ny hoditra hafa izy ireo, satria raha manohy toy izao ianao dia hanao izany aza tonga amin'ny mpampiasa 200 tapitrisa mihitsy fa derivatives 200 tapitrisa ary heveriko fa izany dia manaisotra ny fanekena ny marika ubuntu
Ny iray hafa miaraka amin'ny tantaran'ny sombintsombiny. Ka Kubuntu, Lubuntu ary Xubuntu no ratsy? Mandrosoa, izay lazainao fa tsy misy toerana. "Fivoarana akaiky kely hisorohana ireo remix", izay hahatonga an'i Ubuntu rafitra mihidy hafa.
Fanehoan-kevitra voalohany momba ny Unity nahatonga an'i Ubuntu tsy dia be mpitia ...
Avy eo ireo mpampiasa (toa ahy) dia nahita fa tsy dia ratsy araka ny nolazain'izy ireo ...
Tsotra: Tsy ho noforonina izao ny fanantenana ratsy (na tsara)….
Tsy isalasalana fa manelingelina antsika vitsivitsy izany, ary azo antoka fa hitohy ny fahasosorana!
Marina izany, ny toetra ratsy ananan'ireo izay tsy manohana an'i Ubuntu dia mifarana foana ny lanja, mazava ho azy fa saingy tsy mieritreritra aho fa ny fanidiana varavarana vonjimaika mandra-pahatongan'ny fotoana hanehoana ny valiny dia ny fanapahan-kevitra marina.
Mahatsikaiky ity fofona ity. Nandritra ny fiainako manontolo dia tiako ny Ubuntu, ankehitriny tsy dia be loatra, nefa toa tsy dia ratsy amiko.
Saingy, tsy misy dikany io fanapahan-kevitra io.
Multi dia hoy izy:
Tsy misy dikany ny fanapahan-kevitra. Ary raha ny marina, raha tsy noho ny tsikera rehetra nipoitra manodidina ny Lens malaza, dia tsy hisy ny safidy hanafoanana azy, dia hitohy ny fifandraisana tsy ho voamarina ary raha tsy noho ny fampahafantaran'ny olona azy ireo fa izay ataony amin'ny angona tsy miankina Raha tsy nahazoana alalana avy tamin'ny mpampiasa dia tsy ara-dalàna izany, ankehitriny dia efa tany amin'ny fitsarana izy ireo.
Ankoatr'izay, araka ny efa nolazain'izy ireo tetsy ambony, ilaina ny feedback, ny fanaovana an-tsokosoko ny zavatra tena hahatratrarany dia ny fampitomboana ireo olana ary, vokatr'izany, ny fijerena ratsy kokoa.
Raha azony antoka ny zavatra ataony, dia tsy hisy olana ny manohy manao zavatra ampahibemaso. Ny antony tokana mety hitarika azy ireo hiafina dia ny fahafantaran'izy ireo tsara fa izay kasain'izy ireo hatao manaraka dia mankahala be fa tsy amin'ny fomba tsara.
Mamaly an'i Multi
Ubuntu dia fanapariahana te-hametraka ny tongony amin'ny windows sy mac amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, mba ho lasa distro GNU / Linux lehibe indrindra, tsy ratsy izany fa mifanohitra amin'izay no tsara ary izay nolazain'i Andriamatoa Mark Shuttleworth dia izy ireo Tsy maintsy mandresy ny mac aloha izy ireo, izay tsara kokoa noho ny windows, ary avy eo microsoft, heveriko fa eo amin'ny làlana tsara ny Ubuntu saingy tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra izy ireo izay tsy ho tian'ny mpampiasa Ubuntu mihoatra ny iray ary tsy hanafaka rindrambaiko koa, I Mpampiasa Kubuntu aho amin'izao fotoana izao, tena faly amin'ny fandrosoan'ny KDE ary ity distro ity izay tena manaitra ahy bebe kokoa. Tsaroako tamin'izany fotoana izany fa nampiasa Ubuntu 10.04 aho niaina tamin'io kinova io, heveriko fa io no kinova farany farany talohan'ny nanesorako ny gnome 2 ary ilay 10.10 dia nampiasa gnome 2 ihany koa fa ho ahy 10.04 dia tena tsara.
Ny maha-tsara kokoa noho ny Mac dia midika hoe manokana fotoana bebe kokoa amin'ny famoahana azy ianao, ary tratra izany, tsara, manokana fotoana bebe kokoa xD ... Izaho dia iray amin'ireo nilaza foana fa miaraka amina famoahana Ubuntu iray taona dia mihoatra ny ampy, manome anao fotoana Ho an'ireo mpampiasa hampiasa ilay rafitra nefa tsy alaim-panahy hiova dia manome fotoana ampy ho an'ireo mpandraharaha hiasa milamina kokoa izy io ary hanana vokatra voadio kokoa… zavatra toa an'i LTS.
Ankoatr'izay, raha te hifaninana amin'ny Mac izy ireo dia tsy maintsy manolotra kinova isaky ny 2 taona miaraka amin'ny fanohanana 10 taona ary avy eo isaky ny dikan-teny dia miezaha hihazona ny rafitra arak'izay azo atao ary manolotra fahafaha-manao vahaolana arahin'antoka isan-karazany toa ny Photoshop.
Raha manao izany i Canonical, dia tsy isalasalana fa hahatonga ny mpankafy hitifitra, bebe kokoa maimaim-poana.
Ny zavatra lazainao momba ny famoahana kinova isaky ny 2 taona dia izay tokony hataon'ny distros tsy Rolling rehetra. Malahelo mafy an'i Pardus aho ary ny zavatra tsara indrindra dia ny nitazomana ny fampiharana ireo daty miaraka amin'ny fototra marin-toerana sy mafy orina.
Malahelo be an'i Pardus koa aho, distro tsara tarehy sy tena tsara izany, amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Kubuntu aho satria tena tiako ny KDE ary tsy te hamela azy tsy misy aho ary satria Kubuntu dia naneho fampisehoana tsara tamin'ny KDE, ary koa OpenSUSE, distro tena tsara!
Heveriko fa izany no iray amin'ireo antony namoronana an'i Ubuntu, ireo fotoana fanavaozana lava nataon'i Debian
Tsy misy distro manambara ny tsingerin'ny fivoarany, na ny Fedora, OpenSuse, Mageia, sns ..., dia mamoaka ny kinova rehefa beta sy milamina izy ireo mba hahitan'ny rehetra ny fiovana any aoriana, i Ubuntu irery ihany no nahavita izany Ka , ary ankehitriny noho ny fitoviana amin'ny hafa dia mitsikera izany ianao? Ny tena marina dia tsy azoko ianao.
izany dia noho ny «fiarahamonina»
Tsy marina mihitsy izany. OpenSuse dia manana tsingerina fampandrosoana izay mamoaka ny Milestones malaza ho an'ny besinimaro, izay ny dingana mialoha ny beta, ary ny Mageia raha toa ka misy zavatra iray miavaka amin'ny fangaraharana sy ny fisokafany ho an'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa (azontsika atao tsara milaza fa antithese an'ny Canonical), ary mamoaka ny kinova Alfa ihany koa izy ireo. Ka tsia, tsy i Ubuntu no manokana.
Io no mahazatra indrindra fa ny distro dia mamoaka izay fanovana kasain'izy ireo hiditra ao amin'ireo kinova vaovao, fa tsy miraharaha azy ireo ny tontolon'ny bilaogera, fa maro ny (tsy tokony hatao ankapobeny raha miteny hoe "rehetra").
Ny zavatra Ubuntu dia mety ho toa "manapaka ny fatiantoka" anao, saingy ho avy foana ny fitsikerana, na hoe noho ianao manova fanovana sasany na maninona no tsy, na amin'ity tranga ity satria manafina ny vaovao izy ireo.
Mampalahelo fa (Ubuntu) misolelaka hamaly ny hevitry ny olona fa tsy mifantoka amin'ny tanjon'izy ireo miaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Azo antoka fa ny olan'ny fiantsenana fampindramambola no nahatonga ity fanapahan-kevitra ity. Diniho tsara izany: rehefa nazava tamin'ny alfa 3 na beta 1 ity fisehoan-javatra ity dia nilatsaka ny tsikera nirotsaka tamin'i Canonical, niampanga azy ireo ho nanitsakitsaka ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa. Na dia marina aza fa tsy dia nahay nandanjalanja i Canonical, dia marina ihany koa fa kinova alpha io tamin'izany fotoana izany, ary tokony ho hafa no nanatonana ny tsikera.
Heveriko fa ny kinova Ubuntu izay tsy LTS, dia tokony hokarakaraina bebe kokoa toy ny kinova fampandrosoana (na dia mahomby aza), ary azo antoka (izany rehetra izany dia tombatombana) ny masom-pivarotana ubuntu dia mifantoka kokoa amin'ny distro izay mandeha amin'ny fahitalavitra smarts ho an'ny PC ary solosaina finday, ary azo antoka, miova betsaka mandra-pahatongan'ny fisehoan'ny LTS manaraka amin'ny 2014
Ireo fanakianana mahery vaika ireo dia nanohana an'i Canonical, noho ireo fitsikerana ireo dia nanao ny fanovana ilaina izy ireo mba tsy hanitsakitsahana ny lalàna momba ny tsiambaratelo elektronika eropeana.
Saingy, ahoana no ahalalanao raha tsy manana drafitra ao an-tsainy i Canonical mba hahafahan'ny mpampiasa mamono ireo fikarohana ireo alohan'ny hianjeran'ny tsikera? Dika alpha ihany io, rehefa nilatsaka ny volontany, ary amin'ny alphas dia tsy mila manana ny vokatra vita ...
Ahoana ny fiaraha-monina.
Ity fanapahan-kevitry ny Cannonical ity dia tsy tokony hahagaga. Tokony ho tsaroana fa orinasa Cannonical ary izany dia miorina amin'ny fahavelomany amin'ny fidiram-bola azo avy amin'ny vokatra vokariny, toa ny nataon'i Novell amin'i SUSE na Red Hat, ohatra.
Raha mifanaraka amin'i Nano aho dia io, raha ny fahitako azy manokana, fanapahan-kevitra iray manilika ny fiarahamonina ary mamela azy ho mpamorona Apps ihany (zavatra mahaliana fa ezahin'ny Microsoft ampiharina miaraka amin'ireo rafitra mihidy izay Windows 8 ary indrindra eo amin'ny sehatra ARM), zavatra iray izay mety tsy mahazo aina ihany koa amin'ny fomba fijery samihafa (mazava ho azy raha toa ka misy eritreritra ratsy toa ahy izy ireo). Ny distros rehetra dia mampiseho ny sori-dalan'izy ireo isaky ny manambara ny tsingerin'ny fampandrosoana vaovao izy ireo, ka manamafy ny mifanohitra amin'izay fa tsy marina, ho an'ny santionany dia mila mijery fotsiny ny tranga openSUSE, Fedora, Mageia, Mint, Debian, PClinuxOS, sns. . (manome ohatra vitsivitsy) izay ahafahan'izy ireo ho an'ny vondrom-piarahamonina (miaraka amin'ny aplhas, betas ary RC's) ho an'ny debugging sy ny fandinihana izay ataon'izy ireo.
Efa naneho hevitra momba an'io aho ary averiko indray: Apple sy ny tontolo iainany no manjaka ary mamaritra ny fironana amin'ny tsena ho tsara na ho ratsy. Microsoft, nahemotra amin'ny toerana faharoa, dia manandrana miala amin'ny anjarany amin'ny alàlan'ny fakana tahaka an'i Apple.
Raha tsikaritrareo, Google (mahatakatra Android) sy Cannonical dia niara-niasa mba hanandrana hanao karazana ekosistema mitovy amin'ny Apple ary hanao azy ho counterweight. Ara-dalàna izany satria ireo orinasa roa toa izany dia mifantoka ara-bola ary manandrana mahazo ny ampahan'ilay mofomamy. Na manana tombony ho an'ny Linux sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izany dia ho hita rehefa mandeha ny fotoana.
Tokony ho takatrao koa fa ny webOS an'ny Mozilla Foundation sy HP dia miasa miaraka amin'ireo rafitra fiasa ireo, mieritreritra ihany koa ho mpilalao manan-danja amin'ny fitaovana finday na inona na inona endrika.
Alohan'ny hanoratanao ny akanjonao sy hikapohanao ny tratranao dia tsy maintsy manome fotoana ianao, araka ny efa nolazaiko teo, ary ho hitantsika ny zava-mitranga, amin'ny teny hafa hoe "Tsy mila manindrona ny tenanao ianao alohan'ny hametahana ny voankazo."
Ny tokony homarihina ary tsy misy foroniko na iza na iza, dia ny fandraisan'anjaran'i Cannonical sy ny * fianakaviana buntu (afa-tsy ny Kubuntu, izay tohanan'ny Blue Systems) dia ny hampanakaiky ny tontolo iainana amin'ny fomba sariaka kokoa (zavatra saika ataon'ny ankamaroan'ny rehetra) ho an'ny mpampiasa iraisana.
Zavatra tsy tiako halahelo dia ny zava-misy fa maro ny distro no an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo satria raha tsy misy ireo dia hanjavona izy ireo amin'ny farany. Porofon'ny lazaiko fa azonao atao ny manamarina ny pejy DistroWatch.com (hanome anarana iray) ireo fizarana tapaka ary ho hitanao fa betsaka na betsaka noho ireo mavitrika ary izany dia zava-misy fa raha ny hevitro dia tokony ho raisina. .
Na dia tsy resy lahatra tanteraka aza aho fa marina ny manafina ny ampahany amin'ny fampandrosoana (satria tsy ho "miafina" fotsiny izany, fa "vaovao" sasany), tsy heveriko ho ratsy tanteraka izany. Miombon-kevitra amin'ny soso-kevitra aho, satria mety ho hetsika "press" izany hiteraka fanantenana lehibe kokoa. Raha ny marina dia Google, Microsoft, Apple, RIM no manao azy; ary ny fanantenana andrasana manodidina azy dia goavana.
Tsy mifanaraka amin'ny fandikana omena ilay andianteny voatonona aho. Novakiako ny naoty na lahatsoratr'i Marka ary heveriko fa fanakianana ho azy manokana no ilazana izany. Raha tsy mandeha lavitra dia fantatsika fa maro izay hanakiana foana izay ataon'ny "Canoni $ matetika", na marina izany na tsia. Ireo "mpitsikera" ireo dia tsy miraharaha raha manazava azy ireo ianao ary mampiseho azy ireo fa mety ho diso izy ireo, tsy miraharaha afa-tsy ny "fitsikerana", ary matetika avelany any an-toerana ny tsy fitadiavana andraikitra, very ilay hevitra fa loharano misokatra, tsy misy mametraka fitaovam-piadiana ao an-dohan'olona hanery na inona na inona ary izany - farafaharatsiny hatreto - tsy misy mandoa ny Ubuntu, afa-tsy i Shuttleworth.
Raha mbola loharano misokatra ny kaody "vaovao" dia tsy liana mihitsy aho na hilaza hevitra momba izany izy ireo na tsia dia tsy resy lahatra tanteraka aho, saingy mieritreritra aho fa mety hahaliana ny mijery azy.
Raha mijery azy io amin'ny fomba fihevitra arosonao ianao, dia miombon-kevitra aminao aho ary araky ny efa noresahiko dia tsy ilaina ny manindrona alohan'ny hametrahana ny huarache.
[OT] "tsy mila manindrona tena ianao alohan'ny hametrahana ny voina"; ity fehezan-teny ity raha tsy nanana izy 😛 [/ OT]
Saingy misy ireo amin'ny lafiny roa, ireo izay hanakiana an'i Ubuntu mandrakizay sy mandrakizay, na ny ratsy na ny tsara, ary ireo izay manamarina ny Canonical mivadika Ubuntu ho rindrambaiko fananana, miaraka amin'ny alibi foana hoe ahoana izany orinasa iray izay mitady ambony noho ny tombony ara-toekarena rehetra satria "azo takarina sy misy antonony."
Avy eo tsy misy mitsikera an'i Apple.
"Fa misy lafiny roa"
Marina tokoa izany; fa tsy maintsy manavaka zavatra ianao.
Amin'ny lafiny manokana, tsy mieritreritra aho fa "alibi io", zava-misy io. Canonical dia orinasa ara-bola iray paosy; ary ampiasainay maimaimpoana ny rindrambaiko ataon'izy ireo fa zonay hilazana amin'ny orinasa iray fa mamatsy ara-bola ny fampandrosoana ny fanaovana zavatra. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ireo fizarana novolavolain'ny vondrom-piarahamonina izahay; Ny Ubuntu dia novolavolain'ny vondrona mpamorona naloan'ny orinasa voarindra tahaka izany, toy ny hafa toa an'i Red Hat, dia mino ny orinasa miorina amin'ny loharano misokatra, ary tsy ratsy izany; hatramin'ny voalohany dia haintsika izany. Amin'ny andro manapa-kevitra ny Canonical hanidy ny kaody Ubuntu, dia hanana ny zony hanao izany, miampy ny zonay hanova ny fizarana ho an'ny iray izay manohy miezaka ireo toro lalana tianay.
Aza adala koa isika, maro ireo tetik'asa misokatra no resy noho ny tsy fisian'ny fanohanana ara-bola; Tonga ao an-tsaiko ilay Ubuntu Tweak vao haingana ary tadidiko ny GIMP izay saika resy.
Tsy azontsika atao ny mody milaza amin'i Shuttleworth ny fomba fampivoarana ny fizarana (izay tsy ho azo atao ny manome fahafaham-po ny mpampiasa azy rehetra) raha mametraka ny vola izy mba hampifanarahana azy. Heveriko fa izy, amin'ny maha-lohan'ny orinasa azy, dia mametraka ny torolàlana hanaraka ny fomba heveriny fa hamela azy, farafaharatsiny, hamerina ny vola rehetra narotsaka. Izaho manokana dia mieritreritra fa diso isika raha mieritreritra izany; farafaharatsiny ho an'ny Canonical. Betsaka ny distros novolavolain'ny vondrom-piarahamonina, mazava fa tsy eo amin'izy ireo ny Ubuntu, ary tsy ratsy izany, raha mijanona ho Source Open ny kaody.
Eny, Mark dia efa nilaza azy taloha kelin'izay: "Ubuntu tsy demokrasia [ergo, manjaka eto ny baoliko]."
Fa raha ny hevitr'i Marka dia ny hanangana rafitra hiasa sy handraisana fanapahan-kevitra ivelan'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa azy, heveriko fa ho marina kokoa izany raha toa ka namolavola rafitra fananana izy hatramin'ny voalohany, na nanao am-bola, toa an'i Red Hat Ary raha tsy namidiny taminay ny hevitra "Linux for Human Beings, Linux for All" hatramin'ny voalohany, mazava ho azy fa ho mora kokoa hatrany ny manararaotra ny asan'ny fiarahamonina mandra-pahatonga azy tsy ho ilaina intsony.
Mazava ho azy fa tsy demokrasia izany, misy ny firafitra. Na ireo fizarana "novolavolain'ny vondrom-piarahamonina" aza dia voarindra ambaratongam-pahefana, izay amin'ny maha vondrom-piarahamonina dia tadiavintsika ny fampidirana zavatra iray ary ireo izay manana ny fanapaha-kevitra farany dia mahatakatra fa tsara ny iray hafa; aleo tsy mamita-tena koa isika. Ohatra, ny GNOME sy ny zavatra adalany dia tsy azon'ny demonia, satria sariaka ao amin'ny fiarahamonina izy io, nefa miha-mihidy sy mihidy, miaraka amin'ity rafitra feno fitahiana ity izay manasarotra ny zava-drehetra, miaraka amin'ny hevitra famolavolana izay fantatry ny olona hoe avy aiza izy. Any amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa (sy ny mpamorona maro) no miantsoantso fanovana, ary tsy tonga ny fanovana ary manaraka ny hadalana napetraky ny lehiben'ny mpiasa iray, ny mpiasa ao amin'ny Red Hat.
Mangetaheta aho mahita ny fizarana novolavolain'ny vondrom-piarahamonina, ka ny vondrom-piarahamonim-pampandrosoana dia tsy maintsy mitandrina ny vondrom-piarahamonin'ny mpampiasa ary mifanaraka amin'ny antsika rehetra.
Heveriko fa tsy ratsy ny manao orinasa mifototra amin'ny loharano misokatra, manaja ny hevitrao aho, fa tsy mizara izany.
"" Linux ho an'ny olombelona, ​​Linux ho an'ny olona rehetra "", miala tsiny, fa mieritreritra aho fa misavoritaka ianao. Ubuntu, sarotra ve izany? Voaloa ve izany? Azo ampiasain'ny rehetra ve izy io? Izay no tianao holazaina.
Zavatra iray hafa dia hermetika izy ireo miaraka amina endri-javatra sasany hampidirina (raha mamaky ny lahatsoratra momba ny fanambarana ianao, tena hafa noho io dia tsy mila mandinika an'io isika), satria efa nitranga izany ary tsy nisy nilaza na inona na inona (Overlays Scrollbar, HUD, fampandrosoana voalohany ny Unity, sns. .); ny fanambarana fotsiny dia tsy manova ilay zavatra, ary hitohy ho mora foana i Ubuntu, azo antoka fa loharano malalaka sy azo antoka, andro tsy ananana (satria mety hitranga izany ary eo an-tanan'izy ireo izy ireo, ary ny volany ihany) afaka misafidy vahaolana hafa isika , na tsia.
Ny andro hijanonany ho afaka, farafaharatsiny maro, mankany amin'ny helo izy ireo.
Fantatr'i Canonical fa ny fahazoana vola zavatra efa navotsotra hatry ny ela dia tsy hitondra na inona na inona anao.
Mikasika ny fanidiana ny kaody (vakio etsy ambony), ny marina dia tsy zon'izy ireo izany satria manana add-on be loatra navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana malalaka ary noforonin'ny hafa, ka ny tena azon'izy ireo hikatona dia ny Unity na Ubuntu One, zavatra noforonin'izy ireo; saingy tsy azo atao ny manidy ny Ubuntu, tsy azonao atao ny manidy ny voan-kernel raha tsy ataonao daholo hatramin'ny voalohany.
Tsy mizara ilay hevitra nolazain'i Martin aho fa satria ny Shuttlerworth's Ubuntu dia tsy azo atao ny mitsikera ny kinova Linux, satria raha manolotra vokatra ho ahy izy ireo ary manoro hevitra ahy hividy sy hampiasa azy ireo, dia manan-jo tanteraka aho, amin'ny maha mpampiasa ahy izay Izaho dia mba hanamarihana ireo fanontaniana izay tsy ekeko, tsy maninona raha atolotra ahy maimaim-poana na amin'ny alàlan'ny fandoavana ny vokatra.
Tsy milaza aho hoe tsy kiana izany, fa ny fitsikerana kosa no lazaiko. Avy amin'ny fitsikerana tsy manorina, izay fantatsika fa misy.
Mieritreritra aho fa misy teboka iray izay ivoahan'ny fitsikerana ny maha-kendrena azy ary ny fetrany amin'ny fetra tsy misy dikany, toy ny misy ny fitsikerana tena mitombina; Ohatra, ilay nolazaiko tetsy ambony momba ny Shop Lens, izay nitombo tsikelikely mifanaraka amin'ny tsikera.
Jako dia hoy izy:
Raha jerena ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia nanomboka namaky ny naotin'i Marka aho ary mieritreritra aho fa tsy azon'izy ireo tsara ny tiany holazaina, ny hevitra dia ho an'ireo zavatra novolavolain'i Canonical, mpikambana ao amin'ny fiarahamonina azo atokisana no asaina. afaka manome ny heviny akaiky momba izany izy ireo na miara-miasa. Izy ireo dia karazana zavatra Canonical rehefa mivoatra ny orinasa iray ary manantena ny hamoaka amin'ny fotoana sasany ary ampahafantarina rehefa vita izany.
Tsy haiko raha tadidin'izy ireo ny fotoana nivoahan'ny HUD, dia nilaza fotsiny izy ireo rehefa vonona, na rehefa namoaka ny Ubuntu ho an'ny Android izy ireo, dia fipoahana hafa indray izany, ary noho izany dia tsy noresahina an-karihary teo amin'ny fiarahamonina. Ireo karazana zavatra ireo no resahin'i Shuttleworth, izay hanasan'izy ireo ny olona avy amin'ny fiarahamonina hanampy, ary rehefa tonga eo amin'ny mazava izy ireo dia satria vonona izy ireo. Canonical amin'ny maha orinasa azy dia mila mamolavola ireo tetikasa R&D mamela azy ireo hahazo zavatra lehibe tsy misy orinasa hafa mamokatra vokatra mitovy amin'izany (Microsoft, Apple ary ny hafa), ka izy ireo no ho voalohany.
Tsy tokony hatao miafina kokoa ny hevitra, fa misokatra bebe kokoa amin'ity karazan-javatra ity, iray amin'ny fanehoan-kevitr'i Shuttleworth io:
Manolotra tsiambaratelo * kely kokoa aho, tsy mihoatra izany. Hanasa ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina izahay hiady hevitra sy handinika ary hamolavola ireo zavatra izay tokony nataontsika teo aloha fotsiny. Matoky aho fa hanaiky ianao fa zavatra tsara izany.
Diso fandikana ny doka ry zalahy. Mamaky tsara mba tsy hamoronana fanjakana diso hevitra.
Mamaly an'i Jako
"Ny hevitra dia ireo zavatra novolavolain'i Canonical anatiny, dia olona mpikambana natoky ny fiarahamonina no asaina hahafahan'izy ireo manome ny heviny akaiky momba an'io raharaha io na hiara-miasa. Ireo no karazan-javatra Canonical rehefa mivoatra ny orinasa iray ary manantena ny hanafaka amin'ny fotoana iray ary ambara fotsiny rehefa vita. "
Misaotra anao nitondra ny fanazavana ara-potoana. 🙂
Hahaha, zavatra inona, fandikana diso no nomena an'i Mark, ny mifanohitra amin'izay no izy, tao amin'ny Fayer Wayer no nahitako ny olona nanitsy ilay nanoratra an'io lahatsoratra io:
Tsy fantatro ny antony anaovan'izy ireo izany, noho ny fitenin'i Marka izany, saingy ny mifanohitra amin'izay no izy, ny hevitra dia ny manokatra bebe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina ny fivoarana sasany izay tanterahina anaty ao amin'ny Canonical.
Tsy afaka mamoaka zavatra maivana ny tompokolahy, tsy maintsy dinihinao tsara ny loharano voalohany.
Heveriko fa ireo karazana naoty ireo dia manamarina ilay andianteny voatonona eto. Izay mitsikera dia ho foana; tsy mikarakara ny marina mazava. Fitsikerana ho azy manokana.
@nano (mpanoratra an'ity lahatsoratra ity): Ry namana, atoro anao ity lahatsoratra manaraka ity avy amin'i Shuttleworth izay amaliany ilay zavatra:
Ny natolotro hataoko, omaly, ho azy, dia ny manasa ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina hiasa amin'ireo zavatra iasantsika ho tetik'asa manokana, alohan'ny hanaovantsika izany. Midika izany fa misy kely kokoa aza ny Ubuntu izay TSY noforonina sy nohosoratan'ny olona hafa ankoatry ny Canonical - hetsika izay heverin'ny olona fa horaisina tsara. Hanjary mangarahara kokoa aza i Canonical.
Ny resahan'i Mark dia ny fanasana ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina handray anjara amin'ny zavatra iasan'izy ireo ho tetik'asa manokana, satria ny hevitra roa etsy ambony dia nanazava taminao, ny zavatra toa ny HUD na Ubuntu for Android dia avy amin'ireo tetikasa novolavolaina anatiny sy izany dia nambara rehefa azo jerena.
Amin'ity tsingerina LTS ity dia tadidio fa ny Ubuntu dia tokony havoaka ho an'ny finday sy ny fahitalavitra, ary fantatr'Andriamanitra izay zavatra hafa an-tsain'izy ireo, raha ny momba ny HUD dia maniry ny hamenoana azy ireo amin'ny ho avy izy ireo, ity dia tsy maintsy iray amin'ireo tetik'asa ireo ao ireo izay miasa mangina tokoa, zavatra toa izany. Ny hevitra dia ny hanokafana bebe kokoa amin'ireo zavatra niasan'izy ireo sy iasan'izy ireo ao amin'ny Canonical.
Manantena ny mpamaky fa hamaky ny naoty, raha tsy hoe manova ny lohateny ho iray izy araka ny zava-misy.
Manontany aho, misy korontana be ve momba ny laboratoara miafina an'ny Google, Apple, sns? Nerd?
benybarba dia hoy izy:
Heveriko fa raha misy ny fitsikerana dia satria marina ny teninay, ary tsy te hahalala ireo olona ireo dia nanaparitaka azy io nandritra ny fotoana kelikely.
Mamaly an'i benybarba
Toa tsy dia ratsy loatra tamiko io fanapahan-kevitra io, raha tena tsy manaja ireo mpampiasa azy sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo satria efa ela izy ireo no niara-niasa tamin'izy ireo. Na dia izany aza, heveriko fa raha tsy mandray fanapahan-kevitra i Canonical, dia mbola hampiasa gnome2, vady na birao taloha ihany isika ary na dia efa zatra an'ireto birao miasa ity aza ny sasany amintsika, amin'izao dia mandeha amin'ny karazana GUI hafa ny fironana.
Heveriko fa ny firaisankina manokana, ny vaovao ary ny paikadin'ny tsena no hany zavatra hananany mangingina, etsy ankilany, ao amin'ny Canonical tsy ny programmer sy ny injeniera ihany no miasa, misy ny karazana matihanina rehetra. Tsikelikely dia ho lasa sehatra feno kokoa i Ubuntu. Ho avy ny etona ary iza no mahalala izay zavatra hafa mbola ho avy. Toa mazava amiko ny filan'ny fomba fiasa ilain'izy ireo amin'ny kanônika. Ary amin'ny farany dia hamoaka ilay kaody izy ireo. Android tsy mandeha toy izany? Raha misy tsy mankasitraka ireo fanapahan-kevitra ireo dia heveriko fa misy linux mint, toy ny arch and debian. Salama.
Tsy heveriko fa lasa tompona izy ireo, fa ao anatin'ny fotoana iray dia hivarotra amin'ny $ 20 US dia tsy tokony hahagaga ny olona rehetra, mihoatra izany ny vidin'ny Liona Mountain…. XD
Ny tena izy dia orinasa mandray fanapahan-kevitra manohana azy io ... maro no hahatsapa ho voafitaka ary hahita fa tapitra ny fotoana ... fa hetsika fotsiny io na tiana isika na tsia.
Tena nahazatra anay ny nanasongadinana fa rehefa tsy manome fahafaham-po ny filantsika ny vokatra dia tsy misy ilana azy, manadino fa io vokatra io ihany dia mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpampiasa hafa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Tsy mbola mpampiasa Ubuntu aho, na dia napetraka amin'ny iray amin'ireo solosaina an-tranoko aza (vadiko), saingy miaiky aho fa mifanaraka amin'ny zavatra tokony harahina io fizarana io, faly ny vadiko ary samy manaiky izahay raha io dia ilay distro miaraka amina famaranana hatsarana tsara indrindra vao napetraka ary hatreto tsy misy fihemorana na aretin'andoha an'ireo izay "elit" an'ireo mpampiasa fizarana hafa ho an'ireo mpampiasa "mandroso" toa azy.
Ny zavatra iray hafa dia ny ankamaroan'ny tsikera voarain'ny Canonical dia avy amin'ireo mpampiasa fizarana hafa mankahala azy hatramin'ny fahafatesana.
Andraso fotsiny ... ary araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny fanehoan-kevitra tetsy ambony "Aza rovitra ny fitafiantsika" mialoha.
Ny fanontaniana: mitovy ve ny rindrambaiko manana sy manana karama? Ny fototra Ubuntu, raha jerena ireo singa lozisialy, dia midika fa tsy azo ovaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana izy, noho izany dia hitohy ho Open Source; Mety ho avy ny andro ka mila mandoa vola ianao hampiasana azy, satria indray andro any mety ho leo amin'ny fametrahana dôlara i Dadatoa Marka; Androany, inona no hataontsika?
Tokony hamerina hamaky ny bilaogy Shuttleworth ianao.
Tsy milaza ity lehilahy ity fa hivoatra miafina i Ubuntu. Milaza izy io fa ny fampiasa sasany dia hivoatra ao ambadiky ny varavarana mihidy ary havoaka rehefa vonona izy ireo. Ho fanampin'izany, ho an'ireo toetra ireo dia hitady ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana mavitrika indrindra amin'ny fiarahamonina izy. Fantatry ny fananana bebe kokoa ireo kaody sy hadisoana maro no nandray anjara sy voavaha.
Izany no hataoko koa. Mandeha mihaino olona manelingelina izay tsy misy ifandraisany aho fa mitsikera nefa tsy manome na inona na inona. Noho izany, mampivelatra ny vokatra ho an'ny baoliko miaraka amin'ireo mpamorona ny vondrom-piarahamonina te-hisoratra anarana aho ary rehefa vonona dia avoakako izany ary avy eo mitsikera izy ireo raha tian'izy ireo, dia ilaina kokoa ny mitsikera amin'izany fotoana izany noho ny manakana ny fampandrosoana tsy tapaka.
Ny marina, ny mpanoratra ny fidirana dia tokony hamaky koa; raha ny marina, manoratra momba ny doka iray izay lavitra ny zavatra tiany ho eritreretintsika izy. Miala tsiny fa mbola tsy nanamboatra ny lesoka nataonao ianao.
Raha ny hevitro, ny tsikera tsara dia mahatonga antsika ho tsara amin'ny lafiny rehetra ary raha mamela an'io antony nanombohana io i Ubuntu dia mieritreritra aho fa hihamaro ireo mpampiasa hifindra, raha ny amiko, misaotra fa ao amin'ny Kubuntu 12.04 malalako aho.
Azoko atao ihany koa ny mahatakatra fa imbetsaka ny olona dia manitatra ny zavatra lazainy ary mamorona fanantenana ratsy momba ny Canonical, izay rehetra noresahin'izy ireo momba ny Unity, ohatra, saingy he, toa tsy mety ny mitazona ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fampandrosoana azy manokana ao ambadiky ny varavarana.
Mahaliana izao ny teny filamatra ao amin'ny pejy ofisialin'ny ubuntu:
"Ny fanirianao no didinay."
Izay mandeha milaza: ny irinao dia baiko (mihoatra na latsaka).
ottia !!! Voafafao ve ny hevitro?
Esoriko amin'ny mpamaky google ahy ity fako bilaogy ity
Fafao izany raha sitrakao, mazava ho azy fa spam ny hevitrao ary raha hanodinana, maninona no apetrakao? Toy izany ny zavatra tsotra.
Novakiako ny hevitra nataonao:
noob ianao amin'ny fampiasana Ubuntu, mitroka i Ubuntu
Miala tsiny fa tsy manampy lojika amin'ny adihevitra ity hevitra ity fa tezitra fotsiny ianao. Tsy tranonkala mankasitraka ny hevitray izahay fa tsy misy antony marim-pototra te-hanafintohina ny mpampiasa.
Fisalasalana, fitarainana na sosokevitra amin'ny mailako: kzkggaara [CHECK] desdelinux [POINT] net
Ary tsy manampy lojika be amin'ny adihevitra ny fanaovana izany mifototra amin'ny tantara iray izay tsy mitovy amin'ny fanambarana nataon'i Mark Shuttleworth; tsy hiaro azy, fa ny zavatra misy izy ireo.
Raha mamaky ireo fanehoan-kevitra mihoatra ny 1500 isika, dia vitsy dia vitsy no efa namaky fanambaràna toy izany, na dia ireo izay namaky aza ireo fanehoan-kevitra hialana amin'ny lesoka izay, azo antoka fa tsy fanahy iniana.
Ny tiana holazaina dia hoe mazava ho azy ny resaka, noho izany, tsy hiseho amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny lahatsoratra hafa.
Fotoana, fotoana no ilaina hamakiana, tsy ny lahatsoratr'i Marka ihany fa ny fanehoan-kevitra. Tsy ho any amin'ny helo izany, saingy tsy afaka mahazo lahatsoratra mahomby momba an'io koa aho, raha tsy mandany telo na 4 andro farafahakeliny hamaky an-tsoratra araka izay azo atao. Ary izany no hataoko, ary hanao lahatsoratra iray hafa aho, ary mino koa aho fa tsy ho tiako intsony ilay hevitra ... tsy hoe satria i Ubuntu satria efa nolazaiko, tiako ilay distro, fa satria tsy tiako tsotra izao io hevitra io Tsia mihitsy.
Ubuntu 13.04 Fanontana miafina ambony.
Ny marina dia efa naneho hevitra momba an'io lohahevitra io tamina toerana maro aho ka rehefa tonga teto aho dia tsy hitako izay holazaina: - /
Saingy efa nilaza izany ilay fitenenana ... raha te hanana toerana ambony ianao dia avelao izy ireo hiresaka momba anao, na dia ratsy kokoa aza, fa avelao izy ireo hiteny.
Fiarahabana avy amin'ny Ubuntu Quantal ahy fa manandrana azy aho.
eNyx dia hoy izy:
Voalohany, gaga aho amin'ny isan'ny mpampiasa Ubuntu…. Faharoa, ny fahaverezan'ny mpampiasa Ubuntu dia miharihary noho ny antony maro samihafa, fa raha toa ka voalaza amin'ity vaovao ity (ny tiako holazaina dia ny olona izay efa namaky ny tena izy ary milaza fa tsy toa izany mihitsy) Ubuntu hitohy very mpampiasa ka tsy misy, Canonical dia hahafantatra izay ataony.
Valio i eNyx
Tsy ho mora kokoa ve ny mamaky ny doka voalohany ary mahatsapa fa ny tsy mety dia ity vaovao ity? Ho gaga ianao raha mahafantatra fa nahazo mpampiasa bebe kokoa noho ny "very" i Ubuntu. Nikendry ny hisarika mpampiasa bebe kokoa i Ubuntu fa tsy hijanona toa izao; azo tsikeraina na tsia, fa izy ireo dia manao izany ary tsara lavitra noho ny fieritreretanao azy.
Ny hevitro momba an'io lehilahy io dia mahatonga ahy tsy handany fotoana kely amin'ny zavatra eritreretiny na amin'izay alefany, satria novakiako ireo tranonkala ireo fa novakin'izy ireo ho ahy ary ataon'izy ireo famintinana. Izaho koa tsy hanomboka hiresaka na hitombo izany na tsia, hiditra anaty lozisialy Talibanisma tsy mitombina isika, miankina amin'ny tranokala sy ny info sasany aho ary ianao amin'ny anao, heveriko 🙂
Manaiky aho. Gaga aho amin'ny isan'ny mpampiasa mampiasa Ubuntu na ny derivatives-ny ary miteny ratsy azy (na dia tsy midika izany akory ianao). Ary ekeko ihany koa fa very mpampiasa Ubuntu… very ny mpampiasa "taloha" na "mandroso" nefa mitombo hatrany miaraka amin'ireo mpampiasa vaovao. Rehefa afaka izany dia mitranga hatrany ary ny mpanamboatra solosaina dia mandray izany amin'ny masinin'izy ireo (toa an'i Dell, System76 ary Asus, izay manana safidy hividy ny PC-n'izy ireo miaraka amin'ny Ubuntu fa tsy Windows) Ubuntu dia hitombo hatrany, na iza na iza tia azy. Miorina afovoany ny Ubuntu amin'ny fanaovana "fiainana mora kokoa ho an'ny mpampiasa" ary zavatra iray no vitan'izy ireo tamin'ny Unity, satria ao Dash, amin'ny fanoratanao ny fiandohan'ny teny iray, dia efa manana ny fikarohanao any miaraka amin'ny rindranasa, antontan-taratasy sns. Ny mpampiasa farany izay mitady Laptop hiditra amin'ny YouTube, hijery sary vetaveta ary hanana antontan-taratasy manokana dia afa-po amin'ny filaminana antonony; noho izany Ubuntu dia safidy tsara ho an'io mpampiasa io. Azoko tsara ny hevitry ny vondrom-piarahamonina sy ny fahadisoam-panantenan'ny sasany, saingy indrisy fa nandray làlana tsy niantefa tamin'ity vondrom-piarahamonina "mandroso" ity i GNU / Linux fa ny mpampiasa antonony; Tsy dia ho tianay loatra ny Firaisankina fa tsy ilaina ny mitazona ao an-tsaina fa tontolo mora kokoa ny mampiasa azy satria mandainga amin'ny hafa sy amin'ny tenantsika isika. Ho an'ny rakitsoratra, tsy miaro an'i Ubuntu na ny fanapaha-keviny aho, milaza izay mety hoeritreretin'ny mpampiasa mahazatra rehefa mitady PC. Ny marina.
«Satria ao amin'ny Dash miaraka amin'ny fanoratana ny fiandohan'ny teny dia efa manana ny fikarohanao any miaraka amin'ny fampiharana, antontan-taratasy, sns. »
* COF * MacOS dia nanana an'io fampiasa voadio bebe kokoa nandritra ny taona maro izao ary antsoina hoe Spotlight; tao amin'ny Windows dia nampian'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy avy tao Vista (na dia efa nisy addons ho an'ny XP aza taloha) ary ao amin'ny KDE SC dia misy plasmoid antsoina hoe Run Command izay manao izany ary maro hafa ...
Dash dia manana asa hafa mahaliana kokoa toy ny fidirana amin'ny menus, preview, lens, sns, na dia tsy maintsy averin'izy ireo amin'ny fiteny hafa aza izy io satria ao amin'ny Python dia tsy azo ampiasaina izy io noho ny faharetany.
Ny faharetan'ny Firaisankina dia mivantana avy amin'i Python, izay na dia tiako aza izany fiteny fandefasana izany dia tsy natao ho fototry ny fihemorana ao anatin'ny tontolon'ny birao.
Raha mila fanamorana ny famolavolana fandaharana ianao dia azonao atao ny manao programa amin'ny C ++ ary mamela anao hampiasa python miaraka amin'ireo tranomboky Unity na hamorona rafitra kely aza ... Fa ny olon-drehetra dia manana izay tiany sy tiany.
mila mianatra anglisy ianao….
Mahafinaritra ny hevitrao haha
«Na dia tsy hiresaka momba azy ireo aza izahay mandra-pahatsika fa vonona ny hankalaza izy ireo, faly izahay miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mpandray anjara izay nametraka ny fahatokisana (mpikambana, na manakaiky azy) ao amin'ny Ubuntu, izay te-ho anisan'ny hetsika. "
«Ny Ubuntu dia nametraka ny fenitry ny mangarahara ho toy ny orinasa mamokatra fizarana efa ela be izay, rehefa nanasa izay olona naneho hafanam-po sy fahaiza-manao hanao sy hametraka zony izahay, mifanohitra tanteraka amin'ny politikan'ny Fedora tamin'izany fotoana izany, izay mitaky anao ho mpiasa Red Hat. "
Wow… Tsy nanao an'io karazana fanehoan-kevitra io mihitsy aho satria tsy tiako izany, saingy mino ny fanaovana ny marina aho ary mitady izay loharano tena izy na loharano tena izy alohan'ny nilazako hevitra.
Ny hevitra dia tsy mitombina tanteraka raha mieritreritra isika fa mikasa ny hiady amin'ny colossi-n'ny indostria amin'ny sehatra rehetra misy i Ubuntu ankehitriny!
Avy amin'ny zavatra nolazain'i MS tao amin'ny bilaoginy sy ny resadresaka nifanaovana tamina resadresaka nifanaovana, ny fanaovana ny fivoaran'ny Ubuntu vaovao dia misy ifandraisany amin'ny toe-javatra telo manokana:
1. miseho tampoka miaraka amin'ireo fiasa vaovao mahavariana ireo mpampiasa ny sehatra sy ny rafitra rehetra. ops. (ary noho izany dia miaro ny hevitra mifamatotra akaiky amin'ny fitomboana sy ny fahaveloman'ny orinasa, manakana ny fifaninanana tsy handray azy ireo ary hanala ny "game changer")
2. sorohy ny fifanakalozan-kevitra tsy misy farany izay mitranga ao amin'ny disto toa an'i Debian izay ahatongavana ny marimaritra iraisana taorian'ny dinika sarotra nanaovana ny fivelarana distro - somary nilaza fa ny devs Debian dia Ents, hahahaha
3. Sorohy ny fireharehana sy ny hafetsifetsen'ny "mpanalalana vava aloha" satria, na dia tsapan'izy ireo aza taty aoriana fa tsy araka ny ninoany ny raharaha, noho izy ireo miaina amin'ny fanehoan-kevitra ratsy - tsy mitombina sy diso - mahatonga anao ho resy ny fifantohana amin'ny fampandrosoana ny distro.
Manontany aho: amin'ny farany mety ve ny asa?
Ny netbook Conectar Igualdad dia hanana distro Linux vaovao vita any Arzantina
Linus Torvalds dia mamaly ireo mpamaky Slashdot